China MDF / HDF mpanamboatra sy mpamatsy | ROC
ROCPLEX Medium Density Fiberboard (MDF) dia kilasy ambony, fitaovana mitambatra izay mahomby kokoa noho ny hazo matevina amin'ny fampiharana maro.
ROCPLEX Medium Density Fiberboard (MDF) dia kilasy ambony, fitaovana mitambatra izay mahomby kokoa noho ny hazo matevina amin'ny fampiharana maro. Vita amin'ny kofehy sy resina hazo, Medium Density Fiberboard, izay matetika antsoina hoe MDF, no masaka maina ary notsindriana hamokatra ravina matevina sy milamina.
ROCPLEX MDF (Medium Density Fiberboard) dia miorim-paka kokoa noho ny hazo matevina ary mijoro tsara kokoa amin'ny fiovana dia ny hamandoana sy ny hafanana. Ireo hazo fisaka matevina dia hivelatra ary hifanaraka amin'ny lafiny roa sy mitsivalana rehefa miova ny hamandoana sy ny mari-pana. Noho izany dia mitaky fikojakojana sy fikolokoloana avo lenta ny arimoara, varavarana ary tontonana vita amin'ny hazo mafy.
Manome isan-karazany ny vokatra Wholesale MDF (Medium Density Fiberboard) izahay handraisana ny fangatahana sy ny fangatahana.
Trano fitobiana 40000 metatra toradroa ho an'ny fandefasana amin'ny fotoana rehetra
Antsipirian'ny ROCPLEX MDF
Tava / lamosina: MDF mantamine Melamine MDF Veneer MDF HPL MDF
Kilasy: kilasy AA
Loko: loko MDF manta, loko miloko, loko varimbazaha, loko mahafinaritra, loko vato
Lakaoly: lakaoly E0, lakaoly E1, lakaoly E2, lakaoly WBP, lakaoly MR
Hateviny: 1-28mm (ara-dalàna: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm)
Famaritana: 1220mmX2440mm, 1250mmX2500mm, 915mmX1830mm, 610mmX2440mm, 610mmX2500mm
Votoatin'ny hamandoana: ambany 8%
ROCPLEX MDF Tombony
1.) Hery matanjaka, henjana, marin-toerana ary tsy mora simba.
2.) Ny voajanahary amin'ny vokatra, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny famoahana formaldehyde ambany.
3.) Mora amin'ny milina, miaraka amin'ny fihazonana fantsika mahery.
4.) firafitra sy hakitroka fanamiana.
5.) Toetran'ny akorika akorika sy hafanana avo.
6.) Ny fahafaha-manao fampiharana samihafa.
Fonosana sy famoahana ROCPLEX MDF
ROCPLEX MDF boards dia mety amin'ny fanodinana amin'ny milina fanodinana satria manana toetra mekanika mitovy.
Hery sy faharetana.
Ny tontonana ROCPLEX MDF dia tanjaka lehibe, mitazona tsara ny endrik'izy ireo, mitazona soa aman-tsara ireo kojakoja fitehirizana.
Surface dia malalaka kokoa. MDF dia mamela ny loko avo lenta, ny lamination, ny kasety fanaovana haingon-trano, ny veneer ary ny firakotra hafa.
Ny tabilaon'ny ROCPLEX MDF dia tsy mahazaka holatra sy zavamiaina bitika isan-karazany, izay mahatonga ny vokatra avy amin'ny MDF ho voadio sy azo antoka ao an-trano.
ROCPLEX MDF Fampiharana
■ Fanamboarana fanaka, Haingo, latabatra, latabatra birao.
■ Fampiasana fanarenana.
■ Fanasoketana, efijery, valindrihana, fizarazarana (rindrina, tabilao) sns.
ROCPLEX MDF Topimaso fananganana
Mandritra izany fotoana izany, izahay dia afaka manome anao ny paompy fanangonana, pvc LVL, sns.
Izahay Senso dia matihanina manokana amin'ny famatsiana plywood ara-barotra amin'ny 18mm amin'ny goavambe.
Entana isam-bolana mankany amin'ny tsena afovoany atsinanana, tsena rosiana, regulaly tsena afovoany isam-bolana
Azafady mba mifandraisa amin'ny ekipan'ny varotra anay raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra MDF sinoa.
Manaraka: Melamine Board